ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းပေးသွင်းသူစာရင်းမှဖယ်ရှားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ CTR ကို ၁၈၃.၅% တိုးမြှင့်ခဲ့သည် Martech Zone
စာရင်းပေးသွင်းသူစာရင်းမှဖယ်ရှားခြင်းသည် CTR ကို ၁၈၃.၅% တိုးတက်စေပုံ
ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီ 20, 2017 ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 24, 2020 Douglas Karr
ငါတို့ရှိခဲ့သည့်ငါတို့ site ပေါ်တွင်ကြော်ငြာလေ့ရှိတယ် စာရင်းသွင်းသူ ၇၅၀၀၀ ကျော် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်စာရင်းတွင်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် spam ဖိုင်တွဲများအများကြီးတွင်ကျင်းပသောနေရာတွင်ပြdeliverနာများစွာရှိနေသည်။ သင်အီးမေးလ်ပံ့ပိုးသူများကိုရှာဖွေသည့်အခါသုံးစွဲသူ ၇၅၀၀၀ သည်အလွန်ကြည့်ကောင်းနေသော်လည်း၊ အီးမေးလ်ကျွမ်းကျင်သူများက၎င်းတို့သည်သင်၏အီးမေးလ်ကိုမရရှိသေးကြောင်းသင့်ကိုအသိပေးသည့်အခါ၎င်းသည် junk folder ထဲတွင်တွယ်ကပ်နေသောကြောင့်အလွန်ဆိုးဝါးသည်။
အဲဒါဟာထူးဆန်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လို့ကျွန်တော်မုန်းခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မတူညီသောအီးမေးလ်ကျွမ်းကျင်သူနှစ် ဦး ရှိသည်။ 250ok နှင့် ဘယ်တော့မှမ။ ငါတောင်မှယူခဲ့တယ် ကျွမ်းကျင်သူ Greg Kraios ထံမှမကြာသေးမီကအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ribbing သူကငါ့ကို spammer အဖြစ်ကငါ့ကိုခေါ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်အကြပ်အတည်း၏အဓိကအချက်မှာကြော်ငြာရှင်များသည်စာရင်းကြီးများကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ စပွန်ဆာများသည်စပွန်ဆာများကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲစာရင်းအရွယ်အစားဖြင့်ပေးသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်စာရင်းကိုရှင်းလင်းပါကကြော်ငြာဝင်ငွေနှင့်ရေချိုးမည်ဟုကျွန်ုပ်သိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စာရင်းကြီးတစ်ခုကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်ကြော်ငြာရှင်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည် စောင့်ရှောက် ပိုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမျှော်လင့်ထားသူကိုကြော်ငြာ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ပရိသတ်အတွက်ကောင်းသောစျေးကွက်နှင့်စံနမူနာကောင်းဖြစ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီ နေ့စဉ်နှင့်အပတ်စဉ်သတင်းလွှာ စာရင်းများ:
ငါစာရင်းအတွက်ခဲ့သောငါ၏စာရင်းထဲကအားလုံးအီးမေးလ်လိပ်စာကိုဖယ်ရှားခဲ့သည် တစ်နှစ်ထက် ပို၍ ကြီးသော်လည်းမည်သည့်အခါမျှဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြု၊ အီးမေးလ်ပေါ်မှာ။ ရှေးရှေးများမှာစာရင်းပေးသွင်းနိုင်တဲ့ရာသီအလိုက်ရာသီအလိုက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တစ်နှစ်ကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေအတွက်သတင်းလွှာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့သူတို့ရဲ့ရာသီကိုစောင့်နေတယ်။
ကျန်စာရင်းကို Neverbounce မှတဆင့်ပြေးခဲ့သည် ပြဿနာအီးမေးလ်လိပ်စာများကိုဖယ်ရှား ငါ၏စာရင်းမှ - တုံ, တစ်ခါသုံးနှင့် catchall အီးမေးလ်လိပ်စာ။
ငါစာရင်းသွင်းတော့မယ်ဆိုတာသိရင်ကြောက်လန့်သွားတယ်၊ ဒါပေမယ့် ၂ ပတ်အကြာမှာငါတို့သတင်းလွှာတွေပို့ပေးတယ်။
ကျနော်တို့ကျော်ဖယ်ရှားခဲ့သည် ၄၃၀၀၀ အီးမေးလ်သုံးစွဲသူများ ကျွန်တော်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းစုဆောင်းခဲ့ကြပြီးအခုတော့ ၃၂,၀၀၀ စာရင်းကိုကျန်နေခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာတိုက်ပုံးနေရာချထားမှုနှုန်း ဖောင်းပွပြီး ၂၅.၃% တိုးလာသည်။! အီးမေးလ်လိပ်စာတွေဘယ်လောက်များများကျဆင်းနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမတွေးဘူး။ ဒီအင်တာဗျူးမှာ Greg ကငါ့ကိုခေါင်းဖြတ်သတ်တာကို ၀ မ်းသာတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုစာပုံးအတွင်း၌ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည် ပွင့်လင်းမှုနှုန်းသည် ၁၆၃.၂% တိုးတက်ခဲ့သည်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ click-through နှုန်း 183.5% အားဖြင့်!
အခုတော့ခင်ဗျားမပြောခင်…ကောင်းပြီ၊ ဒေါက်ဂလပ်မင်းကပိုင်းခြေအသစ်ကိုခွဲလိုက်ပြီဆိုတော့မင်းတိုးလာတာပေါ့။ Nope ။ ဤသည်ငါ၏အဟောင်းများကိုပွင့်လင်းမှုနှုန်းနှင့်အသစ်သောပွင့်လင်းမှုနှုန်းနှင့် CTR အသစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဟောင်းကို CTR အကြားမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းနှင့်အတူပြproblemနာကလုံးဝလှုပ်ရှားမှုမရှိသောအိပ်ငိုက်နေသောစာရင်းပေးသွင်းထားသူများစွာရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Inbox ထဲသို့ထည့်သွင်းမထားသည့်ပြproblemနာရှိသော ISP များရှိသေးသည်၊ သို့သော်တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်တို့ရှိခဲ့သောနေရာထက် ပို၍ ပေါ့ပါးသောနှစ်များဖြစ်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ညအချိန်တွင်အလိုအလျောက်ဖယ်ရှားပေးမည့်စည်းမျဉ်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်စဉ်းစားနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှန်တကယ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းများမရှိသောကြောင့်၎င်းတို့သည်မျိုးစေ့များစာရင်းအတွက်၎င်းတို့ကိုဖယ်ရှားခြင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရန်ထပ်ဆောင်းအလံတစ်ခုထပ်ထည့်ခဲ့သည်။
ထုတ်ဖော်: 250ok နှင့် ဘယ်တော့မှမ ကျွန်ုပ်တို့၏ Martech ထုတ်ဝေမှု၏ပံ့ပိုးကူညီသူနှစ် ဦး စလုံးဖြစ်သည်။
Tags: 250okပို့ဆောင်ရေးအီးမေးလ် ctrအီးမေးလ်ကမကယ်မလွှတ်မှုနှုန်းsubscribeသုတ်သင်ရှင်းလင်းကိုဖယ်ရှားစာရင်းပေးသွင်းထားသူ purgeပယ်ဖျက်
အဘယ်ကြောင့် CPG ကုန်သွယ်ရေးစျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးအတွက်သေးငယ်တဲ့အပြောင်းအလဲများကြီးမားသောရလဒ်များကိုဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်